Industrylọ ọrụ njem nleta ga-efunahụ ijeri $ 1, belata GDP ụwa site na 2.8%
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Industrylọ ọrụ njem nleta ga-efunahụ ijeri $ 1, belata GDP ụwa site na 2.8%
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọnụọgụ ndị njem mba ofesi nwere ike gbadata site na 58% rue 78% na 2020. Dị ka data nyocha ọhụụ mere, ọ ga-eduga na mfu $ 910 ijeri na $ 1.2 ijeri na njem mbupụ njem nke ruru $ 1.5 puku ijeri na 2019.
Dabere na akụkọ nke Nzukọ Mba Ndị Dị n'Otu nke Azụmaahịa na Development (UNCTAD), nsogbu nke ụlọ ọrụ ndị njem ga-akpata ọnwụ nke 1.5% na 2.8% na GDP ụwa. Ọ ga-atụgharịrị ihe njeri $ 1.17 na $ 2.22 na-efu efu maka akụ na ụba ụwa.
Ijeri $ 730 furu efu na mbupụ njem site na Jenụwarị ruo August 2020
Ejiri njem nleta dị ka mpaghara nke atọ kachasị na mbupụ akụ na ụba ụwa. Ọ na-akpata ihe karịrị 30% nke mbupụ maka ọtụtụ obere agwaetiti na-emepe emepe (SIDS).
Maka ụfọdụ agwaetiti dịka St. Lucia, ọnụ ọgụgụ ahụ bụ n'ezie 90%. Na 2019, njem mere ka 10% nke mbupụ niile n'Africa. N’uwa niile, o mepụtara pacenti asaa n’ime ahia niile ma were otu n’ime mmadụ iri were were ọrụ. Ọzọkwa, e nwere ndị njem njem njem mba ofesi 7 na ijeri ụlọ 1 na 10.
N'aka nke ọzọ, n'agbata Jenụwarị na Ọgọstụ 2020, ọnụọgụ ndị njem mba ofesi gbadara site na 70% dịka World Tourism Organisation (UNWTO). Ọ butere ihe nfu ijeri $ 730 maka mbupụ ndị njem. Nke a ji okpukpu asatọ karịa ọghọm m nwetara na 2009 nsogbu ụwa niile. APAC duziri ụzọ 79% ebe Africa na EMEA wụsịrị 69% n'otu n'otu.
N'ime ọnwa anọ mbụ nke 2020, US hụrụ nnukwu mfu na ego ndị njem, na-ada ijeri $ 30.71. Mba ndị dị na Europe gụrụ 50% nke mpaghara 10 kachasị elu nwere nnukwu mbibi ego ha nwetara. Ka ọ dịgodị, Caribbean mejupụtara 50% nke mba 10 kachasị elu nwere nnukwu nsogbu GDP n'oge ahụ.
A na-eme atụmatụ na mpaghara ndị njem na-ahụ maka njem nlegharị anya nke China ga-ata ahụhụ 52% na 2020 dabere na nyocha nke Academylọ Akwụkwọ Ọzụzụ njem nleta nke China. Nkwupụta sitere na World Travel & Tourism Council (WTTC) kwupụtara na couldtali nwere ike ida ihe ruru ijeri 36.7 site na njem na njem na 2020.